Dhaabbilee Barnoota Olaanoo Itoophiyaa: 'Ijoolluma dareetti waliin barannutu Maashoo gareedhaan ajjeesse' - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Fuula FB
"Ijoolluma dareetti waliin barannutu Maashoo gareedhaan miidhaa irraan gahee du'aaf saaxile," jedhe hiriyaan barataa Yunvarsitii Gondaritti du'ee.
Rakkina nageenyaa irra deebiin torbana kana yunvarsitiiwwan naannoo Amaaraa keessatti uumameen barattoonni Oromoo lama yunivarsitii Waldiyaafi Gondaritti ajjeefamniiru.
Nagaan dhaabbilee barnoota olaanoo keessaa dhibuun walqabatee, Ministeerri Saayinsiifi Dhaabbileen Barnoota Olaanoo yunivarsitoota biyya keessa jiran hunda poolisii federaalaatiin akka eegamaniif murtaa'uu BBC'tti himeera.
Ajjeechaa barataa Yunvarsiitii Gondar Maashoo Umariifi haala nageenyaa yunvarsiitichaa irratti kan dubbifne hiriyaan baratichaa tokko, Yunvarsiiticha keessatti doorsisni erga eegalee bubbuleera jedha.
Sanbata xiqqaa darbe yunvarsiiticha keessatti akeekachiifni afaan Amaaraafi Afaan Oromootiin barraa'e "Dafaa mooraadhaa bahaa" jedhu bakka hedduutti maxxanfamee arguus hima.
Yunvarsiitichatti gosa barnootaa veterinary waggaa lammaffaa akka baratu kan himu hiriyaan Maashoo Kun, sanbatuma kana ijoollee Oromoo hedduun reebichi irra akka gahe hima.
Barataa Maashoon akkaataa itti gareedhaan miidhaan irra gahe yoo ibsus: "Dilbata ganama saatii 12 tahuuf daqiiqaa shan hir'uutti sagalee 'wayyoo wayyoo' jedhu dhagaheen hirriiba keessaa ka'e.
Ijoolleen naannoo kibbaa doormiikoo jiran mana nuuf cufaa ijoollee sanatu dhufe jedhaniiti balbala doormii keenyaa nuuf cufan," jedha.
"Mucichi kibbaa sun ammas takka turee balbala banee yoo gadi bahu 'wayyoo Maashoon ni du'e' jedhee iyyee nu waame jedha.Battala bira gahanittis qaamni barataa kanaa bakka hedduu waraanamuus hima. "Cinaacha, garaa, addarra, kan waraanan yoo ta'u, harki silaa kukkutaniiru jechuu dandeessa," jechuun miidhan irra gahe daran hammaataa ta'uu ibsa barataan kun.
Skip Facebook post by University of Gondar, Ethiopia
የሀዘን መግለጫ ህዳር 28/2012 ዓ.ም ከንጋቱ 12:00 ገዳማ ተማሪ ማሾ ዑመር የተባለ የ2ኛ ዓመት የቬተርናሪ ፋርማሲ ተማሪ መታጠቢያ ቤት ውስጥ ጉዳት ደርሶበት ህክምና ሲደረግለት...
Posted by University of Gondar, Ethiopia on Sunday, 8 December 2019
End of Facebook post by University of Gondar, Ethiopia
Battala sanatti yaala akka argatuuf wayita carraaqanitti 'fuunee deemnaa' fi 'fuutanii hin deemtan' jechuun walmorkii tureen osoo mana yaalaa hin gahiin daqiiqaa 30 kan tahu yeroon dhumuus ni yaadata.Boodarra konkolaataan dhufee mucaa daree isaa baratu tokko waliin tahanii namoota waamanii akka mana yaalaa geeffamu gochuus hima.Hospitaalatti yaala argachaa turuufi halkan naannoo sa'aatii 5tti lubbuun isaa darbuus ibseera.
Ajjeechaan hiriyaa isaarra gahe 'boru dabareen kan koo tahuu mala' kan jedhuunis yaaddoo cimaa keessa galuu hima barataan kun."Nutis amma ijoolleen mooraa keessa jirru yaaddoo guddaa keessa jirra. Ijoolleen Oromoo naannoo karraatti bakka tokkotti walitti qabamnee taa'aa jirra. Kaaffee deemnee nyaachuufuu baayyee sodaachaa jirra. Haala baayyee, baayyee sukaneessaafi yaaddessaa keessa jirra," jedha.
Haala yunvarsiiticha keessa jiru sodaachuun baqatee Oromiyaatti galuu kan himu barataan kan biraa, "Beeksisni akeekachiisaa mooraa yunvarsiitichaa keessatti maxxanfamu arrabsoo sabummaa kan qabudha.
'Ijoolleen Oromoo yoo daftanii hin baane reeffa keessantu xalayaa gaddaa waliin ergama' jedhanii nu sodaachisu" jedha.
Barataan yunvarsitichatti lubbuunsaa darbe Maashoo waliin daree tokko akka baratu kan himu barataan kun, ijoolleen baraticha irraan miidhaa geessisan warruma dareetti waliin barannudha jedha. "Atattamaan falli barbaadame malee dallaa keessa jiraachuu hin dandeenyu,'' jedhan barattoonni Oromoo yunvarsiitii Gondar baratan yaada BBC'f kennaniin.
Yunivarsitiin Gondar dhimmicharrati dubbisuuf yaalii taasifnulleen murtee irra qaqaban karaa fuula feesbuukii isaanitiinwaan maxxansaniif achuun akka hordoofnu BBC'tti hima.
Haaluma kanaanis, ibsa gaddaa gabaabduu fuula feesbuukii yunvarsitii Gondar irratti maxxanfameen, du'a barataa Maashoo Umar'tti gadda itti dhagahame ibsuun, barattoonni miidhaa kana irraan geessisuun shakkaman to'annoo jala oolfamuun alkan guutuu poolisiin qorannoo gaggeessaa jiraachu hime.
Bu'aan qorannichaa akkuma xumurameenis ni beeksisan jedha.
Haaluma walfakkaatuunis torbeedhuma kana keessa barataan Oromoo kan biraa Yunvarsitiidhuma naannoo Amaaraa keessatti argamu kan biraa Waldiyaatti ajjeefamuunsaa ni yaadatama.
Ministeerri Saayinsiifi Barnoota Olaanoo maal hojjataa jira?
Ministeerri Saayinsiifi Barnoota Olaanoo ammoo haala nageenya dhabiinsa yunivarsitoota biyyattii keessatti mul'taa jiruun wal qabatee, guutu biyyaatti keessa yunivarsitoonni jiran poolisii federaalaatiin akka eegamaniif murtaa'u BBC'tti himeera.
Ministirichatti Daareektarri dhimmoota Komunikeeshinii Obbo Dachaasaa Gurmuu BBC'tti akka himaniitti, yunivarsitoota gara bakka baruu barsiisuu nagaatti deebiisuun kan danda'amu eegumsa cimsuu qofaan waan ta'eefi dhaabbilee barnoota olaanoof kan federaaalaa wan ta'aniif poolisoota federaalaatiin akka eegamaniif murtaa'uu himu.
Obbo Dachaasaan akka jedhanitti, mariiwwan irra deddebiin barattoota waliin taasifamaniin komiin eegdoota dallaa irratti waan kaasaniif, poolisiin haala bilisa ta'een akka barattoota tajaajilaniif murtee kanarra gahamuu ibsu.
Haaluma walfakkatuunis barataan dhiheenya yunivarsitii Walidiyaatti ajjeefame, reebicha waardiyaa yunvarsitichaatiin irratti raawwatameen ta'uu barattoonni BBC'n dubbise himuu gabaasuun keenya ni yaadatama.
Kana malees, dallaawwan yunvarsitiiwan tokko tokko keessatti barreeffamoonni ergaa garaa garaafi akkeekachiisaa raabisamuu barattoonni dubbifne BBC'tti himaniiru.
Haala akkasii kana to'achuuf falli eegumsa cimsuu waan ta'eef eegdoota yunivarsitii hundaa poolisoota federaalaatiin bakka buusuuf murtaa'uu hima Obbo Dachaasaan.
Kunis ''torban dhufu keessatti hojiirra kan oluudha,'' jechuun himu.